21 Archives - Page2of2- Tameelay
May 21, 2020 Tameelay Comments Off on ပိုကျဆံမရှိသျောလညျးလှူဒါနျးနိုငျသောအလှူ (၇)မြိုး
ငှကွေေးမရှိသျောလညျးပေးကမျးနိုငျသော အလှူဒါနခုနှဈမြိုးရှိသညျ။ ထိုခုနှဈမြိုးမှာ… . ၁။မကျြနှာဟနျအမူအရာဖွငျ့အလှူဒါနပွုခွငျး -အပွုံးဖွငျ့ဖျောရှစှောဆကျဆံခွငျး၊ ၂။နှုတျဖွငျ့အလှူဒါနပွုခွငျး -အားပေးစကား၊နှဈသိမျ့စကား၊ခြီးကြူးစကား၊ညှာတာစကား၊ နှေးထှေးသောစကားမြား၊ပွောဆိုခွငျး။ ၃။စိတျဖွငျ့အလှူဒါနပွုခွငျး-စိတျတံခါးကိုဖှငျ့၍သူတဈပါးကို ပှငျ့လငျးရိုးသားစှာဆကျဆံခွငျး၊ ၄။အမွငျဖွငျ့အလှူဒါနပွုခွငျး-ကောငျးသောစတေနာအမွငျဖွငျ့ သူတပါးကိုကွညျ့မွငျတတျခွငျး၊ ၅။ ကာယလုပျအားဖွငျ့အလှူဒါနပွုခွငျး-ကိုယျနိုငျနငျးသောလုပျဆောငျပေးမှုဖွငျ့ သူတဈပါးကိုကူညီခွငျး၊ ၆။ နရောထိုငျခငျးအလှူဒါနပွုခွငျး -လှစေီး၊ကားစီးသညျ့အခါမိမိထိုငျခုံနရောကို အိုမငျးမစှမျးသူ၊ကိုယျဝနျရှိသူ၊နှငျ့ကလေးငယျတို့အား မိမိ၏ထိုငျခုံနရောကိုထိုငျစခွေငျး။ ၇။နအေိမျအလှူဒါနပွုခွငျး -မိမိ၏အိမျနရောကိုသူတပါးတို့ အနားယူရနျပေးကမျးခွငျး။ မညျသူမဆိုဤအလှူဒါနခုနှဈမြိုးသောကောငျးမှုကုသိုလျကို ပေးကမျးလရှေိ့သညျ့အကငျြ့ကောငျးရှိလြှငျ အောငျမွငျခွငျးသညျထကျကွပျမကှာ လိုကျပါလာမညျသာဖွဈပါသညျ။ အရှငျသူရိယ ငွေကြေးမရှိသော်လည်းပေးကမ်းနိုင်သော အလှူဒါနခုနှစ်မျိုးရှိသည်။ ထိုခုနှစ်မျိုးမှာ… . ၁။မျက်နှာဟန်အမူအရာဖြင့်အလှူဒါနပြုခြင်း -အပြုံးဖြင့်ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံခြင်း၊ […]
May 21, 2020 PP Comments Off on ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာများ
လူတစ်ယောက်ဟာ သစ္စာရှိမယ့်သူလား၊ သစ္စာမရှိလိမ်ညာတတ်တဲ့သူလားဆိုတာ သူ့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ သစ္စာမရှိတဲ့သူအများစုမှာ အခုလို လက္ခဏာတွေကို သိသိသာသာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ဖို့ပဲကြည့်တတ်တဲ့အတ္တသမားဖြစ်နေခြင်း သစ္စာမရှိတဲ့သူအများစုဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်အတွက်ပဲကြည့်တတ်ပြီး သူများဘက်ကိုလုံးဝထည့်မစဉ်းစားတတ်တဲ့ အတ္တကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖို့ပဲကြည့်လွန်းပြီး သူများဘက်ကိုမကြည့်ပေး၊မတွေးပေးတတ်တော့ သစ္စာဖောက်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတော့ပါဘူး။ (၂) ကိုယ့်ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်ကို မလေးစားတတ်ခြင်း ချစ်သူတွေ၊လက်တွဲဖော်တွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားတတ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကို မလေးစားတဲ့သူတွေဟာ သစ္စာဖောက်ဖို့ဝန်မလေးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၃) လျှို့ဝှက်ချက်တွေများလွန်းခြင်း […]
May 21, 2020 PP Comments Off on စကားကိုလက်လွတ်စပယ်မပြောဘဲ နှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်တဲ့အခြေအနေများ
စကားဆိုတာ ပြောသင့်တဲ့အရာ၊ မပြောသင့်တဲ့အရာဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ကောင်းကျိုးမဖြစ်စေဘဲ ဆိုးကျိုးကိုပဲဖြစ်စေမယ်၊ တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ထိခိုက်စေမယ့်စကားဆိုရင် ပြောလိုက်တာထက် မပြောဘဲထိန်းချုပ်ထားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ စကားကိုလက်လွတ်စပယ်မပြောဘဲ ကိုယ့်နှုတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ (၁) တခြားသူကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားက တခြားသူကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေမယ်ဆိုရင် ဒီစကားကိုမပြောဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ (၂) တခြားသူရဲ့အမှားကိုထောက်ပြချင်တဲ့စိတ်များနေရင် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အမှားကိုထောက်ပြဖို့စိတ်ဆန္ဒစောလွန်းနေတဲ့အခါ ဘာစကားကိုမှမပြောပဲနေလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သူများရဲ့အမှားကိုထောက်ပြချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကအားနည်းချက်ကိုပေါ်လွင်အောင်လုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ သူများအမှားက ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ (၃) တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုစကားနာထိုးလာရင် တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုစကားနာထိုးတာတွေ၊ ခနဲ့တာတွေလုပ်လာခဲ့ရင် ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘဲ […]
May 21, 2020 PP Comments Off on လောကကြီးကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ မထင်ပါနဲ့၊ လောကကြီးကအမြဲတမ်းတရားမျှတပါတယ်
တခါတရံမှာလောကကြီးကလူတွေအပေါ် တရားမျှတမှုမရှိဘူး၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်းနိုင်တယ်လို့ ပြောကြတာကို ကြားဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ အရာအားလုံးက တရားမျှတစွာဖြစ်တည်နေကြတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လူတိုင်းမှာအားသာချက်၊အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ် လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ အားသာချက်၊အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပြီး အဲ့ဒီအရာတွေကိုအသုံးချနိုင်တဲ့အရည်အချင်းကြောင့်သာ ဘဝတွေကမတူကွဲပြားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူတွေက ရှုံးနိမ့်ရပြီး ၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူတွေက အောင်မြင်ကြတာပါ။ လောကကြီးကတရားမျှတမှုမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ (၂) အခွင့်အရေးကလူတိုင်းဆီကိုရောက်လာတယ် လောကကြီးမှာ ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးမရတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူတိုင်း ဘဝမှာ အခွင့်အရေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ရကြပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကိုသိပြီး အသုံးချနိုင်တဲ့သူ၊ မသိလိုက်တဲ့သူ၊ သိရက်နဲ့အသုံးမချဘဲ ပျင်းရိနေတဲ့သူဆိုပြီး […]